Kuthetha ukuthini ukuphupha ibhulorho? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ibhulorho
2 Ukuphupha ibhulorho kunokubonisa ntoni?
3 Ibhulorho yeplanga
4 Ibhulorho yentsimbi
5 Ibhulorho entle
6 Ukuphupha ibhulorho owewileyo ...
7 Tsiba okanye uwe ebhulorho
8 Ukuwa kwebhulorho
9 Ukudilizwa kwebhulorho
10 Yakha ibhulorho
11 Ngebhulorho phezu kwamanzi
12 Ibhulorho emxinwa
13 IBamba Bridge
15 Ngaba ukuphupha ibhulorho ngumqondiso olungileyo?
Ukuphumelela ebomini, ukutyhala imida, kunye nokwenza utshintsho olugudileyo ziyinxalenye yobomi bomntu wonke. Ukuphupha ngebhulorho sisibikezelo esihle kwaye oko kuthetha ukuba unengxaki yokudumisa. Kubalulekile ukuqhubeka ngoluhlobo kwaye ungaze ukhalaze nganto, kuba ubunzima yeyona nto ikukhulisayo.
Ukuze ukutolika kwephupha kuchaneke, kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha zephupha elo. Zama ukukhumbula imeko yebhulorho, kuba oko kunokumisela izinto ezininzi. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kubalulekile ukuqonda ukuba iphupha elinye aliyi kuhlala linentsingiselo efanayo kuwo onke amatyala.
Ukuphupha ibhulorho kunokubonisa ntoni?
Njengoko besenditshilo ngaphambili, eli phupha liyimpawu entle kuwo onke amabakala obomi bakho. Impumelelo iza kuwe, kuba uwele umgca kwaye wenze iinguqu ezikhuselekileyo. Umzuzu ubuza ukuba uhlale unjalo, kodwa uhlala ucinga nzulu ngaphambi kokwenza.
Ubomi abuhlali bulungile, kuba iyantlukwano kunye neempazamo zinokubonakala, kodwa kuphela kwezona zilungileyo zinamandla okukhula ngaphandle kokuvumela ukusilela kuguqule imeko ngaphakathi kwentliziyo yazo. Apha ngezantsi uyakuba nethuba lokuqonda ezona ntsingiselo zixhaphakileyo zeli phupha.
Phambi kokwenza nasiphi na isigqibo kubalulekile ukuba ucinge kwaye ucinge ngeziphumo ezinokuba nazo kuwe. Zama ukuhlalutya imeko ngokunyanisekileyo, uhlala ucinga ukuba umphumo uyisiqhamo sezenzo zakho.
Enye yezona zinto zibalaseleyo emhlabeni kukwazi ukuba indlela ethathiweyo ilungile. Eli xesha kukudala lilindelwe nguwe kwaye liqinisekisa ukuba ukhetho lwakho lube lolona lulungileyo kwimeko nganye. Kungcono ukuhlala uzolile kwaye uzolile ukuze yonke into iqhubeke nokusebenza.
Ngethuba elifutshane uza kufumana uthando olukhulu kwaye uya kuba nethuba lokonwabela umzuzu ngamnye kunye naye. Ukuphupha ibhulorho entle luphawu lwethamsanqa eluthandweni kunye noqikelelo olukhulu lwenqanaba lokudibana lilonke.
Ukuphupha ibhulorho owewileyo ...
Ngexesha elifutshane uya kuba nethuba lokufezekisa zonke iinjongo zakho. Kodwa ukufezekisa oku kuyakubaluleka ukuba nezisombululo ezitsha zeengxaki ezindala, oko kukuthi, ukwenza izinto ezintsha.
Tsiba okanye uwe ebhulorho
Ngaphandle kwamathandabuzo, ubomi bakho buya kuba bhetele ngakumbi ukuba ufunda ukuphonononga ubuhlobo bakho, kodwa ungabagwebi. Zama ukuhlalutya ukuba umntu othile wenza iimpazamo kunye nawe okanye unomona ngemeko yakho, njengoko kubalulekile ukuba ulumke kakhulu.
Obunye ubunzima buyindalo kubomi bomntu wonke kwaye ukuhamba ngabo kubalulekile ukuzisa ukukhula okungakumbi. Ukuba uphupha ibhulorho ewayo, luphawu lokuba iingxaki ziya kufuna umgudu omkhulu kuwe ukuze ulungise yonke into.
Ukulunga kwakhe kumenze wafunda ukuxabisa ukuzimisela kwakhe ngakumbi. Zama ukuqhubeka unje kwaye ngaphezulu kwako konke kunqande ukuba nomsindo okanye ukukhalaza ngezinto, kuba oko akusombululi.
Ingxelo oyinike iphupha iyinyani kwaye uyakha indlela yolonwabo olukhulu kuyo yonke into. Kubalulekile ukuqhubeka nokugcina ukholo kuThixo nokukholelwa ukuba abantu banokuhlala bengcono.
Ngebhulorho phezu kwamanzi
Zimbini iintsingiselo zabantu abaphupha ngale nto: eyokuqala kukuba ukuba ikhuselekile luphawu lokuchuma okuninzi. Nangona kunjalo, ukuba awukhuselekanga luphawu lokuphepha ukwenza ishishini elitsha okanye nokuthatha umngcipheko.
Ubunzima bukwenzi ukuba ungabinalo ixesha layo nantoni na kwaye oku kuyingozi kuwo wonke umntu. Kuphela kwangaphambili apho uya kuvuna zonke iziphumo kwaye ube nakho ukonwabela yonke into ngelishwa ongakwaziyo namhlanje.
Ayizukuhlala ikwazi ukwenza esona sigqibo kwaye amaxesha amaninzi, unokuzisola. Ukuphupha ngebhulorho luphawu lokuba kuyafuneka uphonononge indlela ocinga ngayo, kuba kule ndawo unokwenza impazamo.
Obunye ubunzima buyinxalenye yendlela kwaye kuya kuhlala kunzima ukoyisa ubunzima. Imfihlo ayikokukhalaza, kodwa kukulwa nje, usendleleni elungileyo kwaye akukho xesha uyakudlula kuyo yonke le meko.
Ngaba ukuphupha ibhulorho ngumqondiso olungileyo?
Ibhulorho yindlela yokudibanisa iindawo ezimbini, ke ukuba uphuphe luphawu lotshintsho olusondeleyo. Ukuba izimo zakho zengqondo zinokuthetha ukuba ulungile, kulungile kakhulu, kodwa ubusika kufanelekile. Into ebalulekileyo kukuqhubeka usenza okulungileyo, oko kukuthi, into exelelwa yangaphakathi yakho.